Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka oo Sharraxay waxyaabaha sababay bur burka ku yimid Shirkii Garowe – Kalfadhi
Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka oo Sharraxay waxyaabaha sababay bur burka ku yimid Shirkii Garowe
Xildhibaan Cabdi Xasan oo katirsan Xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Shirkii Natiijo la’aanta ku soo dhamaaday ee Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya Madaxda Maamul Gobaleedyada kaas oo socday muddo Todobaad ah.
Xildhibaanka ayaa shan qodob ku soo koobay waxyaabihii ugu waa wayn oo ay ka hadleen Dhinacyadii ku shiray magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland waxa uuna hogaanka Dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay door wayn ku lahaayeen Natiijo la’aanta Shirka.
Qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in Shan qodob ay kawada hadleen Dhinacyada, Dhanka Dowladda Soomaaliya-na laga waayay Tanaasul iyo muujinta doorka Dowladnimo ee Soomaaliya si loo xaliyo arimaha taagan ee horseeday in dalka uu galo Xaalad Siyaasadeed oo aad u adag.
Shirki Garowe ee ku dhowaad 10 cisho socday waxa laga wada hadlay:
Taas oo qaadatay 5 cisho , natiijo la,aana ku dhamaatay.
2-Xeerka Doorashooyinka ee ay xukumadda ansixisay oo aan waafaqsaneyn Dastuurka Dalka iyo heshiiskii baydhabo ee Dowladda iyo dowlad Goboledyada Jun 2018,
Taas waa la isku mari waayay.
Sharciga Batroolka oo Baarlamanka la geeyay iyadoo wax laga badaley Heshiski Dowladda fedaralka iyo dawlad goboleedyada ee ku saxiixedeen baydhabo Jun 2018, iyadana waa la isla meel dhigi waayay.
Deeqaha Beesha caalamka magaca Soomaaliya lagu keeno si cadaalad dalka loogu qeybin lana siyaasadeeyo, iyadana waa la isku mari waayay.
Dowladda ayaa wada dib u eegis dasturka iyadoo ay ka maqanyihiin xubnihii dawlad goboleedyada u matali laha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ,xubnahas oo Dawlad Goboleedyada magacaabeen laakin in ay shaqa galan loo ogolaan,waa la isku afgaran waayay.
Shirka magaalada Garowe ee xarunta Gobalka Nugaal ee u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul Gobaleedyada ayaa noqday kii ugu waqtiga dheeraa, sidoo kale waa shirkii ugu horreeyay oo ay dhinacyada hogaanka Siyaasadda Soomaaliya yeeshaan oo Fashil ku soo dhamaada.
Wali ma jirto wax war ah oo ka soo baxay mas’uuliyiinta Dowladda Soomaaliya ee ka qayb-galaya Shirka magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Qaar kamid ah Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada ayaa ka soo baxay magaalada Garowe ee Puntland iyagoo u kala Safray magaalooyinka Kismaayo iyo Nairobi.
Senetaro ka tirsan Aqalka sare oo sagootiyay madaxda Jubbaland iyo Galmudug ee ka baxay shirkii Garowe